SECOND TERM SS 1 IGBO LANGUAGE SCHEME OF WORK - Edu Delight Tutors
HomeIgbo LanguageSECOND TERM SS 1 IGBO LANGUAGE SCHEME OF WORK
SECOND TERM SS 1
SCHEME OF WORK WEEK TOPIC
Mmeghari ihe ndi a muru na taam gara aga (B) Ogugu akwukwo a hooro
Ogugu na Aghotaazaa – Ahuike ndi ntorobia (i) nkowa ndi ntorobia(ii)mgbanwe n’ahu ndi ntorobia(iii)oria ufodu na-emetuta ndi ntorobia (iv) uzo mgbochio
3-4 Mkpuruedemede na usoro odide ya (a) Ikpoputa udaume (b)mgbochiume (c)myiriudaume na udamkpi. Akaraedemede
5-6 Ochichi odinaala (A)Mputara ya.(B)Usoro ochichi odinaal (C)Njirimara Ya na uru ya.
7.Ezumike nke nta.
.Ogugu akwukwo a hooro.”NKE M JIKA” (A) Nnyocha akwukwo a guru.(B) Agwa ufodu di n’ihe a guru (C) Uche umuaka banyere isiokwu na agwa ufodu
Edemede (A)mputara ya. (B)Udidi ya (C)Usoroodideha
Atumatuokwu- (A)mputara ya (B)Udidi ya (C)Omumatu ha (D)uru o bara n”agumagu
Oruaka- (A)Mputara ya. (B) Udidi oruaka(C)Uruoruaka
IZUỤKA MBU (WEEK 1)
IHE ỌMỤMỤ: Asusu igbo
KLAASI: SS 1
ISIOKWU: Mmeghari ihe ndi a muru na taam gara aga, ọgugu akwukwo a hooro: Mbediogu nke F.C Obgalu
NDINAYA: 1. Mmeghari ihe ndi a muru na taam gara aga
ọgugu akwukwo a hooro: Mbediogu nke F.C Ogbalu NDINISIOKWU 1.Mmeghari ihe ndi a muru na taam gara aga NDINISIOKWU 2.ọgugu akwukwo a hooro: Mbediogu nke F.COgbalu
IZU ỤKA NKE AB ỤỌ(WEEK 2)
IHE OMUMU: Asusu Igbo
ISIOKWU: Ọgugu na Aghotaazaa – Ahuike ndi ntorobia (i) nkowa ndi ntorobia (ii)mgbanwe n’ahu ndi ntorobia
(iii)ọria ufodu na-emetuta ndi ntorobia (iv)uzo mgbochi oria ndi a
NDINAYA: 1.Ọgugu na Aghotaazaa: Ahuike ndi ntorobia, nkowa ndi ntorobia, na mgbanwe n’ahu ndi ntorobia.
Ọria ufodu na-emetuta ndi ntorobia, na uzo mgbochi oria ndi a.
Ọgugu na aghotaazaa: Ahuike ndi ntorobia, nkowa ndi ntorobia, na mgbanwe n’ahu ndi ntorobia.
NKOWA IHE BU OGUGU NA AGHOTAAZAA
Ogugu na aghotazaa putara a guchaa, ghota, a zaa ajuju na esote ihe a guru.
AHUIKE: Ahuike putara mgbe mmadu na-anaghi aria oria. Mmadu na-enwe ahuike mgbe o nweghị ntụpọ n’ahụ dika ọrịa n’ime ahụ ya, na-eri erimeri nke
oma, ma dikwa ike oru. Ndị kwuru okwu sị na onye nwere ahụike nwere ndụ: na ahụike bụ okpueze.Ọ bụ ya kpatara ndị ntorobịa ji agba mbọ ịhụ na ahụ ha zuru oke mgbe ọbụla.
AHUIKE NDI NTOROBIA: Ahuike ndi ntorobia bu onodu umuokorobia na umuagboghobia (ntorobia) ga-ano na-enweghi oria.
NKOWA NDI NTOROBIA
Ndi ntorobia bu ndi gbara bido n’afo iri na abuo ruo n’afo iri na asato. A na- akpo nwaanyi zonyere ukwu n’afo ndi a nwa agboghobia, ma na-akpo onye nwoke nwa okorobia. Ma na ha zukota onu a kpoo ha ndi ntorobia.
MGBANWE N’AHU NDI NTOROBIA
Mgbe umunwoke si na ibu nwata puo wee banye na ibu ntorobia, ha ga-enwe mgbanwe di iche iche n’ahu ha. Mgbanwe ndi a gunyere:
Igba aji n’abu ha.
Igba aji n’ihe ha jiri burunwoke
Igba afuonu na igba ajin’obi
Olu ha ga na-adasi uda ike ma ha na-ekwu
Ha ga na-etokwa ka ome ji n’ihi na ha na- eri oke nri.
Ha na-ebido nwewe mmasi n’ebe umunwaanyi no.
Ya mere, ha ga na-adi ocha, na-akpachapuru uwe ha na-eyi anya.
(ii) Mgbanwe n’ahu umunwaanyi
Mgbanwe umunwaanyi na-enwe n’oge a gunyere ndia:
Ha na-agba aji n’abu
Ha na-agba aji n’ihe ha jiri buru
Ha ga-ebido ikpu
Ha ga-ebidokwa ihu nso ha n’onwa o bula.
Ike ha na apata ukwu ha ga-ebido buwe ibu.
Akpupko ahu ya ga- na- akwo
iix. Ha ga na- etokwa oso oso.
Mgbe nke a na-eme onye ahu kwesiri ka akowara ya ihe mgbanwe ndi a putara na ndu ya di ka nwaanyi. O ga na-akpachapu anya wee na-eke ekike ka o wee na- adi mma ile anya.
kedu ndi bu ndintorobia
Deputa mgbanwe opeka mpe ise a na-enwe n’ahuumunwoke
Deputa mgbanwe ise a na-enwe n’ahuumunwaanyi
MGBANWE N’OMUME NDỊ NTOROBỊA NJIRIMARA HA
Otu nwoke onyeọcha aha ya bụ Peteson (1966) chọpụtara ụzọ
akparamagwa abụọ n’ebe ndị ntorobia nọ. Agwa ndị ahụ gụnyere:
Agwaọjọọ ha (b) omume ha (pesọnaliti ha)
AGWA ỌJỌỌ HA
Mgbe ndi ntorobia na-amalite ndụ ha, ha na-enwe ọtụtụ agwa ọjọọ ha na-eme iji megide ndi mmadụ ma ọ bụ okirikiri ebe ha nọ. Agwa ndị ahụ gụnyere:
E nweghi ndidi (impatience).
Ime ngaghari iwe wee na-emebi ọtụtụ ụlọakwụkwọ ha di iche iche (destructiverioting).
Izu ohi (stealing).
Ịgba akwụna (prostitution).
Ịba n’otu nzuzo(occultism).
Iti ụmụaka ndi obere ihe aghara aghara (bullying). 10.Ibi ndụ nnwere onwe (free life).
Ibi ndụ okomoko na ndị achọghi ima (luxiriouslife).
Ọ bụ mgbe ụmụnwaanyi n’ime ha ji atụrụ ime ọkwa (unwanted pregnancy).
Ọ bụ mgbe ime mpụ ule ji amalite (examinationmalpractice).
MGBANWE N’OMUME HA (Pesọnaliti ha)
Ịtụ egwu na iweda onwe ha ala.
Ha anaghi enwe ntụkwasiobi n’onwe
Agụụ ịkwa iko.
NDINISIOKWU 2: ORIA UFODU NA-EMETUTA NDI NTOROBIA, NA UZO MGBOCHI ORIA NDI A.
Oria ndi na- echere ndi ntorobia aka di otutu. Mana nke ha na-adabakari n’ime ya mgbe o bula bu oria mmeko nwoke na nwaanyi. ufodu oria a na-ebute site na mmeko nwoke na nwaanyi bu ndi a:
Oria obirinajaocha (HIV/AIDS)
Onye oria obirinajaocha (HIV Patient)
Oria ndi ozo bu:
Lung cancer( A na-ebute oria ojoo site n’inusiga)
Uzo Mgbochi Oria Ndi a
Uzo di iche iche e nwere ike isi gbochie oria ndi a bu nke a
Gonoria: kwusi mmeko nwoke nanwaanyi
Sifilis: kwusi mmeko nwoke nanwaanyi
Oriaobirinajaocha (HIV/AIDS): Gbaara mmeko nwoke na nwaanyi oso tutu i luo nwaanyi ma o bu
Oria iba: E kwela ka mmiri na-ado aghara aghara n’okirikiri ebe ibi, kawa ahu na-ekpuchi mmiri i dowara n’ulo ekpuchi ka anwuta ghara ino n’imeya
mubaa, na-arahu n’ime neet, tupu i lakpo were aziza ulo piagbuo anwuta febatara n’ime ulo, ma o bu igbaa ha ogwu anwu.
Taifoid fiva : A na-esite n’inu mmiri adighi mma ma o bu ocha ebute oria taifod fiva
Uzo ndi a ka e si egbochi oria taifoid bu na a ga-esi mmiri n’oku nke oma tupu a nuo.
Afo osisa A na-esite n’inu mmiri adighi mma ma o bu ocha ebute oria afo osisa. Uzo aga- esi egbochi oria afo osisa bu na a ga-esi mmiri n’oku nke oma tupu a
Lung cancer: A na-ebute oria a site n’inu siga. Iji gbochie oria, i ga-akwusi ise ma o bu inu
Oria akpukpa: Mmadu iru unyi na-akpata oria a. Gbaa mbo na-asa ahu, ma na- edebe uwe gi na-ebe obibi gi
Deputa oria ndi nwere ike i metuta ndintorobia
Deputa uzo niile e nwere ike isi gbochie oria ndiahu
Ndi gbara site n’afo iri na abuo ruo n’afo iri na asato ka a na-akpo———
— (a) ndi okenye (b) ndi ntorobia (c) umuaka (d) ikwu na ibe
Ana- ebute otu n’ime oria ndi a site na mmeko nwoke na nwaanyi (a) iba (b) taifoid fiva (c) obirinajaocha (d) afo osisa
Otun’ime ndi a esoghi na mgbanwe a na-ahu na ahu umunwaanyi (a) igba aji n’abu (b) ihu nso n’onwa (c) ikpu ara (d) igba afuonu
Anughi ezigbo mmiri na-ebute otu oria n’ime ndi a (a) Oria taifod (b) oria mkpobiukwu (c) anya mgbu (d) aka mgbu
Kedu oria e si n’anwuta ebute? (a) afo osisa (b) iba (c) gonoria (d) taifod fiva
Kowaa ihe buahuike
Depụta agwa ọjọọ ndi ntorobia ise i maara.
Kedu ndi bu ndintorobia?,
Deputa oria ise na-emekpa ndi ntorobia ahu
IHE OMUME NKE NGWUCHA IZUUKA (Weekend Assignment)
Guo ntuziaka udaasusu nke ogechukwu leti okeye,isi nke nari na iri asato na ano (Page 184)
Guo mkpuruedemede na nsoroedide ya
ORU NGWUCHA IZUUKA (Weekend Activity)
Deputa ihe ato ozo nwere ike ime ka ndi ntorobia ghara inwe ahuike.
AKWUKWO OGUGU ( REFERENCE TEXT)
Ntuziaka Maka Udaasusu, Utoasusu, na Omenaala Igbo Nke Ndi Sekondiri Ukwu Nke Mbu (ss 1) NkeOgechukwu Leti Okoye.InnogeTrading Company Limited.
IZU ỤKA NKE AB ỤỌ(WEEK 3)
ISIOKWU: Mkpuruedemede na nsoroedide ya (a) Ikpoputa udaume (b)mgbochiume( c )myiriudaume (d) udamkpi.
NDISIOKWU: 1. Ikowa mkpuruedemede , na inye omumaatu
Mkpuruedemede: (i) Mgbochiume (ii) Udaume (iii) Myiriudaume
MKPURUEDEMEDE IGBO (IGBO ALPHABET)
Nke a bu abidii eji ede asusu Igbo. Mkpuru edemede e ji ede Igbo taa bu nke Onwu komiti weputere n’afo 1961. A na akpo ya Onwu otografi. Ha bu ndi a:
Mkpuru edemede nke nnukwu
A B CH D E F G GB GH
GW H I Ị J K KP KW L
M N Ń NW NY O Ọ P R
S SH T U Ụ V W Y Z
Mkpuru edemede Igbo di iri ato na isii (36). O kere onwe ya uzo abuo; udaume na mgbochume.
Mkpụrụedemede nke obere
Mkpuruedemede igbo o diole?
MKPU RUEDEMEDE: (I) UDAUME (II) MGBOCHIUME (III) MYIRIUDAUME (IV) UDAMKPI
Udaume Igbo di naani asato. Ha bu ndi a A E I Ị O Ọ U Ụ
Udaume kere onwe ya uzo abuo ;udamfe na udaaro
Otu “A” (Udamfe) “Otu E” (Udaaro)
Mkpọmụda((vocal cord) na-ama jiji oge a na-akpoputa udaume asato ndi a.
Ụdamfe( light vowels)
(otu A)-Ha bu ‘a’ na ndi nwere kpom n’ike.d.k a,ọ,ụ ,ị
Ụdaaro(heavy vowels)(otu E)-Ha bu ‘e’na ndi enweghi kpom n’ike dika e,o, u .i
a-aka,anya, anụ e-eke,eze ,elu
ịgba,ịta, ịnya i-ite ,isi, ije
ọ-ọnụ,ọcha,ọkụ o-oche, ose,oge
E wepuchaa udaume n’ime abiidi ,ndi ozo bu mgbochiume. Ha di iri abuo na asato. Ha bu:
B, CH, D, F, G, GB, GH, GW, H,
J, K, KP, KW, L, M, N, N, NW
NY, P, R, S, SH, T, V, W, Y, Z.
Mgbochiume kere onwe ya uzo abuo;mgbochiume mkpi na mgbochiume nge Mgbochiume mkpi(diagraph) – CH, GB, GH, GW, KP,
KW, NW, NY, SH. Ha di itoolu(9)
Mgbochumenge(single) B, D, F, G,H, J, K, L, M, N, N
P, R, S, T, V, W, Y, Z. Ha di iri na itoolu(19)
MYIRIUDAUME (SEMI VOWEL)
Nke a bu oge ‘m’ na ‘n’ na-aru oru dika udaume.Nke a na-adi ire oge ‘m’ ma o bu ‘n’ nodebere mgbochiume n’okwu Igbo. Mkpọmụda((vocal cord) na-ama jiji oge a na-akpoputa M na N.
Mmanu ( Palm oil) Ndo (Sorry)
Mma (Knife) Nri (Food)
Mmiri (Water) Nkita (Dog)
EBE “M na N” NA ARU ORU DI KA MGBOCHIUME
Mgbochiume “M na N” na- egosiputa mgbe M na N anaghi enwe uda ma ha kwuru onwe ha. M na N a naghi enwe uda, naani ma a agbakwunyere ha mkpuruedemede udaume.
Maka Nata muta Naani Mere Nari Napuru Nara Metara Muo Muta Muru
Udamkpi bu udaume abuo sokotara onwe ha na mkpuruokwu, ma nwee otu uda, ka a ga-asi na ha bu otu udaume. E nwere udamkpi ano n’asusu igbo. Ha bu: \_a, ie, ịọ, io
\_a O piara ya utari n’isi Amaka gara ahia
ie Rie ji ahu dum
O naghi eme njem n’ehihie
ịọ Oke aririọ na-ebute oke mkpari Kwusinu uf] n’uloaku
io si ebe a piopu
Ewu ahu si na mpio gbapu
Gosiputa uzo ole udaume kere onweya?
Guputa mgbochiume nge enwere
Otu n’ime ndi abu udaume (a)ny (b)p (c)u (d)m
Okwu nwere myiriudaume n’ebea bu (a)maka (b)noro (c)nti (d)ube
Akara edemede a na-etinye ebe a juruajuju bu? (a)kpom (b)akara
ntimkpu (c)rikom (d)akara ajuju
Udaume Igbo di ole?——-(a)asato (b)iri (c)iri asato(d)abuo
MyiriudaumeIgbo bu? (a)d na n (b)m na n (c)h na d (d)o na
Gini bu ogugu na aghotaazaa?
Kowaa ihe bu ahuike ndintorobia
Guo Nchikota ihe omumu nke asusu igbo maka ule sinio sekondiri nke Maazi Ngoesi M.C
IHE OMUME NKE OGUGU(Pre-reading Assignment)
Guo edemede na udi ya di iche iche n’ihe omumu asusu igbo di na laptop gi.
IHE OMUME NKE NGWUCHA IZUUKA (Weekend Activity)
See onye Eze n’ime akwukwo asusu igbo gi
Nchikota ihe omumu nke asusu igbo maka ule sinio sekondiri nke Maazi Ngoesi M.C
IZU ỤKA NKE AN Ọ(WEEK 4)
NDINISIOKWU : (i) Akara ntupo (ii) Kpom (iii) Rikom (iv) Akara ajuju
Akarauhie (vi)Akara mkpu (vii)Kpọmkpọm
Akaraedemede bu akara di iche iche a na-etinye n’ihe e dere ede iji mee ka ogugu, na mkoputa ya doo anya, ma nwee nghota zuru oke. Akaraedemede e nwere di otutu, ma na anyi ga-eleba anya na mkpuru ole ma ole.
Akara Igbo Bekee
. kpom fullstop
, Rikom comma
‘ Rikomelu Apostrophe
? Akara ajuju Question mark
! Akara ntimkpu Exclamation
: Kpomkpom Colon
Kpọm (.) Kpọm bụ akaraedemede e ji ama na okwu, ma o bụ ahịrịokwu abịala n’isi njedebe. Mgbe ọ bụla e dehara okwu were tinye ya kpọm, a mara na echiche ya akwụsila.
Nne m gara
Achọghị m ihụ gi ebe a ụbọọchịọzọ.
Rikom (,) Eji rikom egosi na okwu agwụbeghị kama na onye na-ede ya ma ọ bụ onye dere ya chọrọ ikute ume tupu o dewakwa. Rikọm na-akọwakwa na okwu ejerubeghi ebe ọ na-eje. Ọmumaatu:
Ha zutara nnu, ji, ede, na osikapa n’ahia.
Ji, ede,akidi na akpụ bụ nri ndi
Akara ajuju (?) Mgbe ọ bụla anyi na-ede okwu ọ bụla bụ ajụjụ, ọ bụ akara ajụjụ ka e ji ya. N’asụsụ Igbo, e nwere mkụrụokwu ndi anyi maara nke ọma di ka njụajụjụ. Ebe ọ bụla na mgbe ọ bụla e dere ha, a ga-ama na ọ bụ ajụjụ mana iji mee ka ụtọasụsụ ha zuo oke, a na-etinyekwa ha akara ajụjụ. Omumaatu :
Gini bụ ahagi?
Olee mgbe ị bịara ?
Akarauhuie (-) E ji akarauhie egosi na mkpụrụokwu abụọ na-arụkọ ọrụ ọnụ mana ha abụọ adịghị mma idekọ ọnụ. Ọ bụ n’etiti mkpụrụokwu na-enyere ngwaa aka na ngwaa ọ na-enyere aka ka akarauhie na-adi. Ọmụmaatụ :
Uche ga-eje ọrụ echi.
Nwanne m na-ebe
Akaramkpu ( !) Nke a bụ akaraedemede e ji amata na okwu ekwuru bụ mkpu ka e tiri ya. Ọmumaatu :
Chei ! Anwụọla manwụ
Si ebe a gbafuo ọsọ ọsọ!
Kpọmkpọm (:) okwu ọ bụla nwere kpọmkpọm n’azụ ya na-egosi na ya agwụbeghi. Na o nwere okwu ndi ọzọ ga-esote ya n’azụ. Ọmụmaatụ :
Nna m gara ahịa zụta ji : Nne m sie ya esi
Ngọzi, ihe ndi ị ga-azụtara m ma ị gaa Ọnịcha bụ : uwe, mgbaaka, akpụkpọụkwụ na ncha
Rịkọmelu (‘) Ebe rịkọmelu na-apụtakari ihe n’asụsụ Igbo bụ mgbe ‘NA’ nz-arụ ọrụ
di ka mbuụzọ. Ọmụmaatụ :
Nneka nọ n’eluụlọ
Osisi sụrụ yan’anya
Gini bu Akaraedemede
Deputa akara edemede ise e nwere, ma tugharia ha na
Akarauhie bu (a)hyphen (b)full-stop (c) comma (d) colon
Kpom ka a na-akpo ———-na bekee (a) fullstop (b)hyphen (c)colon (d)exclamation mark
Onye ka i bu . Akara e kwesiri itinye na ngwucha ahiriokwu a (a) . (b) , (c)?
Hoputa akara etinyere nke oma n’ahiriokwu ndi a (a) Ọ na- bia (b)ha diole:
(c) bia ebe a! (d) Ọ biara! ma na o hughi m,
Comma putara ——– n,asusu igbo (a) kpom(b)akara uhie(c) akara ajuju (d) rikom
Deputa akaraedemde ise i maara ma tuhgaria ha na Bekee Gini bu akara edemede? Kowaa na mkpuruokwu ole na ole.
Guo Ntuziaka Maka Udaasusu Nke Ogechukwu L.O (pages )
Guo maka Ochichi Odinaala
Tinye akaraedemede n’ahiriokwu ndi a
Ha na abia
Anyi zutara nnu ose na mmanun’ahia
Simplified Igbo Grammar for Secondry Schools by M.C Ofodile
IZU ỤKA NKE ISE (WEEK 5)
ISIOKWU: Ochichi odinaala (a)Mputara ya (b)Usoro ochichi odinaala (C)Njirimara ya na uru ya
NDISIOKWU: 1. Nkowa ochichi odinaala
Usoro ochichi odinaala
NDINISIOKWU 1:NKOWA OCHICHI ODINAALA
Ndi ochichi odinaala(Traditional rulers)
Ochichi odinaala bu udi ochichi ndi obodo ji elekota onwe ha. A na-enwe ochichi odinaala n’obodo; nke a na-enye onye o bula ohere ikwuputa uche ya. Nke a na- eme ka ndi obodo nwee otu obi n’ihe o bula ha n-eme.
N’obodo di iche iche iru oru ochichi obodo na-adikari n’aka ndi isi ala, ndi ichie, ma o bu ndi eze. O bu oru ha ichedo iwu na omenaala obodo n’ihu na udo di n’obodo.
Tupu ndi ocha abia, di ka e si koo n’akuko e nweghi ebe e nwere eze na-achi ala igbo dum. Ma na nke a aputaghi na ndi igbo e nweghi uzo ha si achikota onwe ha. Ihe o putara bu na ndi Igbo enweghi onye a hoputara maka ochichi di ka ndi Yoruba siri nwee Oba, ndi Hausa Enwee Emir, Ndi Calabar Obon, ndi mbammiri enwee Amanyanagbo. Isi ochichi n’oge gboo na amalite na’ezinaulo. Ezinaulo o bula nwere onye isi. Onye is ezinaulo na-abu onye kasi mmadu niile okenye n’ebe ahu. ihe o bula o kwuru na-abu ihe onye o bula bi n’ezinaulo ahu ga-eme.
Oge ndi bekee batara n’ala Igbo ha chere na ndi Igbo e nweghi usoro ochichi ha ji achikota onwe ha. Ma na ha mechara choputa n’ikpeazu na nke a abughi eziokwu.
Gini bu ochichi odinaala?
Gini bu echiche ndi Bekee na mge gboo banyere ochichi odinaala?
NDINISIOKWU 2:USORO OCHICHI ODINAALA
Abia n’ala igbo usoro ochichi digasiri onwe ya iche iche. N’oge gboo ndi igbo na- achikota onwe ha no’obodo n’obodo. Ya bu obodo o bula nwere Eze ma o bu Igwe na-achi ha. n’ihi na ha na-achi onwe ha n’obodo n’obodo, ma rukwaari n’ogbe.
N’ihe na ogbe o bula nwere Igwe ma o bu ndi Eze obodo di ka ichie ga-eleru ha anya, ma na-agwa Eze ka ihe siri kwuru. Nke a mere ka onu na-eru onye o bula n’okwu.
N’usoro ochichi odinaala, ochichi aka ike adikabeghi ya, n’ihi na onye o bula nwere ike ikwu uche ya.
N’ala igbo obodo o bula na-anoro onwe ha, ma na-achikwa onwe ha. O nweghi onye a ga- asi na o bu ya bu Eze Igbo niile n’uwa. Igwe ma o bu Eze bu obodo o bula na nke ha. Ya bu ochichi anaghi adi n’aka otu onye n’ochichi odinaala.
Gini bu ochichiodinaala?
Deputa ndi ato chiri echichi na-enye aka n’ochichi
Udi ochichi ndi obodo ji elekota onwe ha ka a na-akpo (a) emume (b) ochichi odinaala (c) omenaala (d)onweghi
Ochichi odinaala na-enyere ndi obodo aka ime otu n’ime ndi a: (a) inwe otu obi (b) ikpo asi (c) izu ohi (d) izoala
Ochichi odinaala na-adikari n’aka otu n’ime ndi a (a) ndi ofogori (b)umunna
(c) umuaka (d) ndi isiala
Tupu ndi ocha abia na Naijiria, e nweghi eze na-achi dum (a) Yoruba
Hausa (c) Igbo (d)kwara
Otu n’ime ndi a esoghi n’ochichi odinaala (a) Eze (b) Ofogori (c) Igwe (d) Ndi Ichie
Kowaa usoro ndi Igbo si achikota onwe ha tupu obibia ndiocha
Gini mere e ji si na igbo e nweghji eze tupu obibia ndiocha
Guo isiokwu ndin’ a muru izuuka a n’Igbo maka Sinio Sekondri 1 Nke E Nolue Emenanjo
Guo njirimara ochichi odinaala n’ihe omumu asusu igbo di na laptop gi.
Deputa udi ochichi odinaala ato imaara.
Igbo maka Sinio Sekondri 1 Nke E Nolue Emenanjo
IZU ỤKA NKE ISII (WEEK 6)
ISIOKWU: Njirimara ochichi odinaala na uru ya
NDINAYA: 1. Njirimara ochichi odinaala
Uru ochichi odinaalabara
NJIRIMARA OCHICHI ODINAALA
E ji otutu ihe mara ochichi ochichi odinaala, ma na ole ma ole ka a ga-edeputa ebe a.
A na- enwe eze na-achi obodo n’ochichi odinaala
A naghi azo eze azo n’ochichi odinaala; n’ihi na Eze nwuo Okpara ya anochie anya
Ochichi odinaala nwere usoro usoro esi eweputa Eze.
N’ochichi odinaala di ka o di n’oge gboo, onye Eze na-ano n’obi ya oge niile. A naghi agbagha okwu Eze agbagha n’ochichi odinaala.
A na-enwe ochichi onye kwuo uche ya.
Deputa njirimara ochichi odinaala anoimaara
Kwuputa ndiiche ato di na ochichi odinaala na nke ugbu a
URU OCHICHI ODINAALA BARA
Uru ochichi odinaala bara gunyere ndi a:
1.O na-eme ka obodo di n’otu
O na-eme ka obodo nwee usoro ochichi nkeonye o bula O na-esoro n’ime ya.
O na-enye aka igbochi ogbagharan’obodo
O na-enye aka na mmepe nke obodo
Ndi mmadu na- esite na ya akwu utu isi ha nye ndigomenti
O na-enye aka ime ka udo di n’obodo
Ochichi odinaala na-enye aka ichoputa onye mere ihe ojoo, ma o bu onye mereihe ala na-aso nso
Ochichi odinaala na-enye aka ikwaliteomenaala nke mba o
O bu site n’ochichi ka e si enwe iwu na-achi obodo, na ndi bi n’ime
Deputa njirimara chichi odinaalaato
Deputa uru ise ochichi odinaalabara
Kooro umuakwukwo ibe gi ihe ndi obodo gi na-eme onye zuru ohin’obodo.
NCHIKOTA NNWALE (General Evaluation) Tumbom Tumbom
A na-enwe ——– na-achi obodo n’ochichi odinaala (a) Amadioha (b)dibia
A naghi azo otu n’ime ndi a azo n’ochichi odinaala (a) Eze (b) ala (c) ulo (d) nwa
Ihe ndi a niile bu uru ochichi obodo bara e wezuga otu (a) udo (b) ihunanya (c) mmepe obodo (d) igbummadu
Ochichi odinaala na-enye onye o bula ohere ime otu n’ime ndi a (a) ikwa uko (b) igbu mmadu (c)ikpo asi (d) I kwu uche ya
N’oge gboo onye ezena-ano naani (a) n’usekwu (b) ya (c) n’oba ji
ya (d) n’obi n’ulo arusi
Guo isiokwu a muru n’izuuka a n’Igbo maka Sinio Sekondri 1 Nke E Nolue Emenanjo
Guo Oruaka na laptop gi.
Deputa udi oruaka ise i maara.
IZUỤKA NKE ASAA (WEEK 7) EZUmIKE ỌKARA TAAM
IZU ỤKA ASAT Ọ(WEEK 8)
IHE OMUME ASỤSỤ IGBO
KLAAS|—- S. S. 1
ISIOKWU—- ỌGỤGỤ AKWỤKWỌ A HỌRỌ “NKE M JI KA” NDINAYA –1.NNYOCHA AKWỤKWỌ A HỌRỌ
AGWA NDI NA YA.
NNYOCHA AKWUKWO AHOPUTARA:
USORO A NA-AGBASO MGBE A NA-ENYOCHA AKWUKWO.
Ihe mgbakwasi ukwu:
Aha akwukwo bu ihe izizi onye na-atule akwukwo ga-akowaputa.O ga-akpo aha akwukwo.
Oga-akpotukwa aha onye dere akwukwo,ma kowakwaa nkenke akuko banyere ndu onye ahu ma buru na o maara ya.
Afo mbiputa na ndi biriya:
Onye nyocha ga-akowaputa afo e jiri wee biputa ya,ulooru biputara ya.
Mgbe a na-akowaputa ihe gbasara ntoala akwukwo,ihe ndi di mkpa bu:(i) Ebe
(ii) Oge.(iii) Ndi e bu n’ uche dee ya. 5.Isiokwu:
Olee ihe akwukwo na ekwu maka ya,kedu out ihe maobu ihe ndi bu okpurukpuokwu akuko ya ?
N’uzo mkpirisi.e dee ihe akwukwo na-ako maka ya?
Olee otu ode akwukwo siri hazie akuko ya?O haziri ha n’isi? Kedu otu isi obula na ibe ya siri jikota?Kedu ka akuko siri noo n’isi n’isi? (plot)
Olee ndi a kpoo aha n’agumagu? Kedu otu agwa ha siri diri? Ihe ode kwuru maka onye ahu,ihe onye ahu kwuuru onwe ya,ihe ndi ozo no n’akuko ahu kwuru maka ya,na ihe onye nnyocha kpebiri n’echiche nke aka ya.
Omenaala na nkwenye ndi putara ihe:
Ana-arutu aka n’omenaala;nkwenye di iche iche na ofufe ndu.
Ihe ojoo di icheiche:
Ana-arutukwa aka ihe ndi oha na eze na-agbaruru ihu.(Ihe ojoo di iche iche).O nwere echiche na-ezighi ezi odeakwukwo gosiputara?
N’ebe a,a na-enyocha otu ode si webatasia atumatu okwu di iche iche dika: ilu,akpaalaokwu,ukabuilu,mburu,odika,ntakwu w.d.g.Kedu ka odeakwukwo siri dee ya?
Olee ihe ode choro ka si n’agumagu ya muta?
Kpoputa ihe izizi a na-ahu na-inyochaakwukwo
Ole afo akwukwo aputara
Olee mgbe ebighaririya?
Otu ihe a na-atule mgbe a na-enyocha akwukwo bu…… (a)ego (b)mmad[(ch) ntoala (d) obi ojoo
Omenaala p[tara ihe n’akwukwo a.
(a) iyi (b) iwa akwa (ch) igba alukwaghi m (d) iru mgbede
Aha obodo putara ihe naya bu (a) }ka (b) nteje (ch) }niche (d) awusa
Deputa ihe ato a na-atule mgbe a na-enyocha akwukwoagumagu
Dee nke nke edemede maka agwa abuo din a akwukwo
IHE OMUME NGWUCHA IZUUKA
Kowaa agwa kachara puta ihe.
Guo akwukwo a ma were omuwaatu enyere gi mee nyocha di dabara adaba.
Guo akwukwo NKE M JIKA Isi nke abuo
NKE M JIKA WAEC edition nke Nwaozuzu G.I
IZU ỤKA NKE ITOOLU (WEEK 9)
NDINAYA (i) Edemede:Mputara ya na u di ya di iche iche
(ii) Usoro edemede
Edemede :Mputara ya na u di ya di iche iche
Edemede bu echiche mmadu maọbụ ọchịchọ mmadụ nke e deturu edetu n’akwụkwọ. Ọ bụ ihe ọbụla e chepụtara ma depụtakwa n’akwụkwọ nke nwere
nghọta na echiche zuru oke.
E nwere udi edemede di iche iche nke ufodu n’ime ha bu
Edemede akọmakọ, Edemede nkowasi, Edemede ilu, nk]wasi, Edemede mgbagha, Mkparitaụka Edemede ekwumekwu– Edemedeleta
EDEMEDE AKOMAKO – Ndi a bụ edemede nke a na-ako maka ihe mere n’oge gara aga. Dika Ubochi m gaghi echefu
EDEMEDE ILU – Nke a na-abu ilu nke a ga –enye nkọwa ya. A ga-eji akuko dabara adaba were gosi ilu ahụ. Dika – Awọ anaghi agba ọsọ ehihien’efu.
EDEMEDE LETA: Nke a bu udi edemede anyi na-edere ndi nne na nna anyi nke na-enwe ebe akwukwo ahu si maobu a ga-eziga ya nke. E nwekwara ike I dere ya ndi enyi anyi ugbu a nke’a adikeghizi n’ihi
MKPARITAUKA – N’edemede a, a na-eziputa ihe mmadu abuo maobu karia na-akpa. Dika Mkparitauka di n’etiti ndi ntorobia abuo banyere uko
EKWUMEKWU:- Nke a bu edemede iji iziputa okwu mmadu na-agwa ogbako Dika sinio Prefect ulo akwukwo gi deputa ihe ga-agwa Ohaneze banyere ulo akwukwo unu ubochi unu ga-asi ndi gucharala akwukwo gaa nke
6. EDEMEDE MGBAGHA
Edemede Mgbagha bu udi edemede na-egosiputa mgbagha maobu nkwenye banyere isiokwu e nyere. Dika
O ka mma izu nwanyi n’akwukwo kariaumu-nwoke
O ka mma ibu onye oru ugbo karia ibu dibia
EDEMEDE NRURITA UKA:- Nke a bu edemede na-eziputa mgbagha n’etiti otu abuo. Dika Oru ugbo ka mma karia izu ahia ma Ọ bụ ibu onye ojiego a chụ ego karia irụ ọrụ
Kpoputa udi edemede ato I maara.
Kowara m edemede akomako.
Edemede nwere usoro o na-agbaso. A ga-ejiri usoro ahu o na-enwe were dee ya. Usoro edemede Igbo ndi ahu bu:-
MMALITE – O ga-enwe mmalite ebe ode ga-ede ihe maka isiokwu e nyere ya. Mmalite ga-adi uto ka o wee mee onyee na-agu ya itusa obi ala guo
ETITI/AHU EDEMEDE: – N’etiti maobu ahu edemede ka ode ga-ede okpurukpu okwu o choro ide maka
MMECHI: – Onye na- ede edemede ga-achikotazi ihe o dere maka isiokwu ahu onu. O ga-ama mma ma o were okwu kwesiri ekwesi mechie
USORO EDEMEDE LETA
Leta so n’otu udi edemede e nwere. Leta dika edemede ndi ozo na-enwe
Leta na-enwe ụzọ ato ndia
MMALITE – Leta na-enwe mmalite ma mmalite yana-abuo
Adreesi, (ii) Ekele mmalite omuma
Deeper Life High School,
Km.42 Lagos-Ibadan Expressway,
Ogun State. 28/8/2013
AHU LETA – N’ebe a ka ode ga-ede ozi niile o choro izi site na Leta ya. O choo ugwo akwukwo ya ebe’a ka o ga-ezi
Mmechi – Na mmechi Leta, Odee ga-edezi aha ya iji ziputa onye na-ede Leta.
O bu m,
Nwa gi nwanyi, Ngoo.
Echiche mmadu cheputara banyere isiokwu ma dee ya ede bu–
Edemede (b) Isiokwu (ch) Mkparita uka(d)Nkejiasusu
Otu udi edemede m maara (a) Isiokwu (b) Mkpoputa (c) Nzute (d) Ilu
Onye na-ede leta ga-etinyeriri otu na ndia
Nkejiasusu (b) Adresi (ch) Mvelope (d)Mkpokota
Ebe onye na-ede e demede na-ede isiokwu o jiri debe edemede ya bu na – edemede
ahu/etiti (b) mmalite (c) mmechi (d)
Onye na-ede Leta ga-ederiri – na ngwucha iji gosi onye dere ya.
Isiokwu (b) ahu/etiti (c) mmalite (d) aha
Udi edemede ole ka e nwere? Deputa
Usoro ole ka edemede na-agbaso?
Nye nwa nkenke nkowa banyere edemede
Deputa adresi otu o kwesiri idi mgbe I na-edere nne na nna gi leta. (b) Deekwaekele
Guo akwukwo EXAM FOCUS IGBO MAKA WASSCE AND JME. Nke Nolue Emenanyo Et al isi iri na otu
(Chapter II, page 25) Maka edemede.
Guo Akwukwo Nchikota nke A.I Nze page 44
Dee nkenke edemede maka Edemede Nrurita uka naEdemede Ekwumekwu.
IGBO maka WASSCE and J.M nke Emenanjo et al
Nchikota Akwukwo Maka Igbo Sinio sekondiri (Correct step)
IZU ỤKA NKE IrI (WEEK 10)
ISIOKWU: Udidi atumatuokwu, omumatu na uru o bara n’agumagu. NDINAYA:
Udidi atumatuokwu na omumatu ha.
Uru o baran’agumagu.
NDINISIOKWU: 1. Udidi atumatuokwu na omumatu ha. A.UKABUILU (PARABLE):
Ukabuilu bu ilu e tinyee na nwantakiri akuko. O bu obere akuko ndi Igbo na-ako n’uzo ilu iji were choo okwu mma.
Udele ghuchara ahu were juo umunna ya kedu ka o di ugbua, umunna ya were zaa ya si ya na o bu ugbu a ka njo malitere riwa ya
Nke a na-akowa mi mime ihe ojoo karia otu o si eme na mbu.
Otu nwa mmuo na-acho mmadu. O were puta n’uzo were hu ozu nwuru anwu, o were tie E hee na ije eberela ya
Nkowa: Nke a putara mmadu inweta ihe o na-acho na ntumadi n’atughi anya ya.
B. EGBEOKWU (hyperbole)
Egbeokwu bu atumatuokwu a na-akpunyefe nnu n’ihe a na-ekwu site n’iji ihe kariri ihe a na – ekwu wee ma atu iji meek a ihe a na-ekwu maka ya na-ada ka egbe.
Ndi no n’ama egwuregwu ahu kariri aja din’ala.
Uwa dum na-anu ka okeke na-agwo uran’abali.
CH. IGBUDUOKWU (PARADOX)
Igbuduokwu bu atumatuokwu ebe a na-ekwu okwu na-adiba ka okwu iberiibe ma e chemie echiche lee ha anya, ha eziputa eziokwu.
Onye atufughi o naghi
D. EKWUECHEOZO (IRONY)
O bu atumatuokwu nke mmadu ji eziputa ihe ozo o bu n’uche nke na-aru uka n’ihe onye ahu kwuputara.
I biakazi n’oge wee bia mgbe ana-agbasa.
Akola m oji n’ihi na oji juru uloa.
E. MBIAMBIAUDA (ASSONANCE)
O bu ebe uduaume na-aputa ugboro kwuru ugboro.
Nna Ada si Aba gaa ahia na
Amara na-ata akara na achaghari anya na-acho
F. MBIAMBIAMGBOCHI (ALLITERATION)
Mbiambiamgbochi bu ebe otu mgbochiume na-aputa ugboro kwuru ugboro.
Nna ya ochie bulawara akwukwo.
Onye ohi ahu no ugbua na-esi igwen’imi
H. ASINIILU (WELLARISM)
Asiniilu bu udi ilu a na-akpo out onye maobu out ihe aha sin a o bu ihe onye/ihe ahu kwuru.
Udara siri na o bughi naani ya mutara nwa a na-apiwa
Nkita siri onye ya turu oche wenatakwara ya ego na ntukwu amarala ya ahu.
Deputa ndiiche di n’etiti mbiambiamgbochi nambiambiauda?
NDINISIOKWU: 2URU ATUMATUOKWUBARA N’AGUMAGU.
Atumatuokwubu okwu nka a na-etinye n’okwu maobu n’edemede iji mee
ka o nwee ugwu ma too uto n anti.
A na-enye nwata akwukwo na-etinye atumatu okwu n’edemede ya maak puru ichen’ule.
E ji atumatuokwu acho edemede agumagu mma.
Atumatuokwu na-abata n’edemede o bula e dere n’asusu
Mmuta atumatuokwu na-eme ka ederede aguoazaa di mfe. NNWALE:
Deputa uru abuo atumatuokwu baran’agumagu?
NCHIKOTA NNWALE: Tumbom Tumbom Horo otu n’ime ndi a:
Kedu akpaalaokwu nkowa ya bu I gba nnukwu uzo? (a) edi suru ya o nu (b) o nwu obu n’aka (ch) o na-agu okpa onu (d) o ji mbe n’aka.
Nneka dika nza putara na (a) Nneka nwere nku ka nza (b) nneka tara nnukwu ahu (ch) Nneka di mkpumkpu (d) nneka nwere ugbene ka
Kedu udi atumatu okwu gwongworo bu? (a) ndika (b) mburu (ch) akpaalaokwu (d)
Kedu udi atumatu okwu ahiriokwu a-onwu, i mee aru na-egosi? (a) ndika (b) mburu (ch) mmemmadu (d) akpaalaokwu.
Ole nke bu aha nsinuuda n’ime ndia? (a) mkpurumkpu (b) komkom (ch) osisi (d)agbisi
Kowaa ihe bu mmemmadu? Were ahiriokwu di iche iche were choo nkowa gi
Were omumatu ato kowaa n sinuuda?
Akpaalaokwu na ilu ha bu otu? Kowaa onwe gi nke oma.
Kedu ka ukabuilu si mere di iche n’ilu naakpaalaokwu?
Deputa ndiiche di n’etiti ilu na ukabuilu? Were ihe omumatu were choo nkowa gi mma.
Oru ngwucha izuuka:
Guo Nchikota Ihe omumu nke Asusu Igbo maka Ule Sinio Sekondiri nke Maazi M. C. Ngoesi, Optimal, Press Ltd. Nig. (pejis 141-148)
Ihe Ogugu maka nkwado izuuka o zo:
Gue oruaka na uru oruaka bara.
Ihe omume nke ngwucha izuuka.
Deputa akpaalaokwu ise I mara ma kowakwo ha nkeoma?
Akwukwo nlere anya:
Ndezu utoasusu Igbo nke ndi Sinio Sekondiri nke Chinekum Ofomatadere; Format Publishers (NIg.)Ltd.
Nchikota Ihe omumu nke Asusu Igbo maka Ule Sinio Sekondiri nke Maazi
Ngoesi dere. Optimal Press Ltd. Nigeria.
IZU ỤKA NKE IrI NA OTU (WEEK 11)
ISIOKWU: Oruaka: (A)Mputara ya (B)Udi oruaka di iche iche (C)Uru oruaka bara
NDINAYA: 1.Nkowa ihe bu oruaka, na oruaka di iche iche
Uru oruaka bara
NDINISIOKWU 1:NKOWA IHE BU ORUAKA
Oruaka bu ihe mmadu na-eme na ndu o ji akpata ego. Onye o bula kwesiri inwe oruaka n’ihi na a na-ewere onye na-enwwghi oruaka di ka ofogori.
ORUAKA DI ICHE ICHE
E jiri oruaka di iche mara ndi igbo. Oruaka kere onwe ya uzo abuo; Ha bu:
(A) ORUAKA NKE ODINAALA
Nke a bu oruaka ndi ahu si n’aka ndi nna nna anyi ha rute anyi aka. Di ka:
Ikpa enunu (ikpa anu ulo di iche iche di ka ewu, aturu, ezi, ehi wdg)
Iji osisi tuoihe
iix. Ikpu ite Wdg.
Oru ikpa ihe okpukpa Oru ikpa anumanu
Oruaka ogbara ohuru bu oruaka choro akonauche sitere n’agumakwukwo. O bu oruaka si n’obodo ndi ocha wee rute anyi aka;
Mgbako, na nwepuego
Deputa akaoru ise imaara
NDINISIOKWU 2: URU ORUAKA BARA
Ndi a bu uru oruaka bara
Inwe oruaka na-enye mmadu ugwu, nansopuru
E ji oruaka ama ihe bu akaraka mmadu
Oruaka na-eme ka onye o bula kwuuru onwe ya. O nweghizi onye ga-asi ibe ya nye
O na-eme ka ime mpu laa n’obodo
O na-eweta aguu igu akwukwo
Onye nwere oruaka na-eriju afo, na akpachapuru ezinaulo yaanya
Adighi enwekebe ndi ofogori n’obodo onye o bula nwereoruaka
Deputa oruaka iri imaara
Kowaa uru ise oruaka bara
Tumbom Tumbom Hoputa nke a choro
Oruaka putara ——– (a) izu ohi (b) akoanuuche (c) ofogori (d) ihe mmadu na-aru akpata ego
Oruaka kere onweya uzo (a) abuo (b) ano (c) ise (d) ato
Otu n’ime ndi a bu oruaka ogbara ohuru (a) Azumahia (b) Iku azu (c) ntaakuko (d) Ichunta
Kedu nke bu oruaka nke odinaala? (a) ichu nta (b) nkuzi (c) ikwa akwa (d) inya ugboala
Oruaka na-enyere mmadu aka ime otu n’ime ndi a (a) ikpo asi (b) izu ohi (c) iriju afo (d)onweghi
Kowaa ihe buoruaka
Deputa oruake ise imaara
Deputa uru ato oruaka bara
ORU NGWUCHA IZUUUKA (Weekend Assignment) Guo akwukwo Igbo Sekondri N’usoro Bezik Edukeshon
IHE OGUGU MAKA NKWADO IZUUKA OZO(Pre-reading Assignment)
Gugharia isiokwu ndi akuziri site n’izuuka abuo ruo n’izuuka ato. IHE OMUME NKE NGWUCHA IZUUKA( Weekend Activity) Deputa uzo ata e nwere ike isi kwalite oruaka n’ala Igbo AKWUKWO OGUGU ( REFERENCE TEXT)
Igbo maka Sekondiri N’usoro Bezik Edukeshon Nke S.N Okafo, na nke M.U Osuji, Elites’ Publishers.
IZUUKA IRI NA ABUO (WEEK 12)
IZUUKA IRI NA ATO (WEEK 13)
(Visited 2,222 times, 2 visits today)
Asusu igbo IZUỤKA MBU (WEEK 1) IHE ỌMỤMỤ: Asusu igbo ...
IZU ỤKA NKE AB ỤỌ (WEEK 3) IZU ỤKA NKE AB Ụ Ọ (WEEK 3) IHE OMUMU: Asusu Igbo KLAASI:...
ASỤSỤ IGBO (L2) JSS 2 TAM NKE ABỤỌ IZUỤKA 1. 2. 3. 6. 7. 8. 9. 10. 11....
ASỤSỤ IGBO (L1) JSS 2 TAM NKE MBỤ IZUỤKA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8....
THIRD TERM SSI SCHEME OF WORK ENGLISH LANGUAGE THIRD TERM SSI SCHEME OF WORK ENGLISH LANGUAGE WEEK 1...
Tags:IGBO, SECOND TERM, SS 1
Exam Questions Second Term SS 1 Computer Studies